मुख्य पृष्ठपत्रपत्रिकामा आजभ्याक्सिन सुरुमा स्वास्थ्यकर्मीलाई
विराटनगर, २० मंसिर । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन भण्डारण गर्नेदेखि लिएर व्यवस्थापन गर्न छुट्टै समिति बनाएर काम अघि बढाएको छ ।
अमेरिकी कम्पनी फाइजर र मोडर्ना, बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, रुसी स्पुतनिक–५ को खोपको अन्तिम परीक्षण भइरहेका बेला मन्त्रालयले खोप व्यवस्थापन गर्न भ्याक्सिनको द्रुत कार्य योजना पारित गरेको हो । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट बिहीबार पारित योजनामा आठवटा क्षेत्र पहिचान गरी समिति गठन गरिएको छ । सरकारले भ्याक्सिन आयात गर्न यसअघि नै औषधि अध्यादेश जारी गरेर कानुनी बाटो खुल्ला गरिसकेको छ ।
भ्याक्सिन ल्याउन, भण्डारण गर्न र खोप लगाउने व्यक्तिको पहिचानलगायतका काम गर्न आठवटा विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गरिएको मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले बताए । १५ वर्ष मुनिका बालबलिकाबाहेक ७२ प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप व्यवस्थापन, भण्डारण र जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्नेभन्ने योजना बनिसकेको मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलले बताए ।
कोरोनाविरुद्धको भ्याक्सिन भित्रिएपछि जोखिम क्षेत्रमा खटिने व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर पहिलो चरणमा खोप लगाउने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा खटिने व्यक्ति, अत्यावश्यक सेवामा दूरी कायम नगरिकन काममा लाग्नुपर्ने व्यक्ति, सफाइ कर्मचारीसमेतलाई पहिलो चरणमा खोप लगाइने छ । विशेष गरेर सुरुमा भ्याक्सिन स्वास्थ्यकर्मीलाई लगाइने छ । कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ
भ्याक्सिन सुरुमा स्वास्थ्यकर्मी